Arimaha Sharciga Ugu Sareeya ee Wax Lagu Qoro | Martech Zone
Dhowr sano ka hor, mid ka mid ah macaamiisheena ayaa qoray qoraal weyn oo blog ah waxayna raadinayeen sawir wanaagsan oo ay ku muujiyaan. Waxay isticmaaleen Raadinta Sawirka Google, waxay heleen sawir la sifeeyey inuu yahay mid aan boqortooyo lahayn, waxayna ku dareen boostada.
Maalmo gudahood, waxaa la soo xiriiray shirkad weyn oo xagga sawirada saamiyada ah waxayna la shaqeeyeen biil dhan $ 3,000 si loogu bixiyo isticmaalka sawirka oo looga fogaado arrimaha sharciga ee la xiriira in lagu dacweeyo ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha. Waa arintaas oo nagu kicisay inaan iska qorno Sawirada Deposit sawirro la awoodi karo oo tayo sare leh oo aan boqortooyo lahayn.
Haddii aad ganacsi ku leedahay baloog ama, kaliya aad leedahay baloog shaqsi ah, arrimaha isma beddelo. Dabcan, adoo adeegsanaya baloog shirkadeed waxaad ku sharxi kartaa in xamaasadda dacwad-qaadiddu ay xoogaa ka sii cadho badan tahay isla markaana ciqaabtu xitaa ka sii sarreeyaan. 3-da arrimood ee sharciga iyo masuuliyadeed ee ugu sareeya ee ay qorayaashu wax ku qoraan waa:
Ku xadgudubka xuquuqda maqalka - adeegsiga shaqooyinka uu ilaalinayo sharciga xuquuqda lahaanshuhu ogolaansho la aan, ku xad gudubka xuquuqaha gaarka ah ee la siiyay qofka leh xuquuqda daabicista, sida xaqa soo saarida, qeybinta, soo bandhigida ama qabashada shaqada la ilaaliyay, ama sameynta shaqooyin ka soo jeeda.
Khayaanada - xiriirinta bayaan been ah oo wax u dhimaya sumcadda shaqsi, ganacsi, wax soo saar, koox, dowlad, diin, ama qaran. Si loo sameeyo sumcad dil, sheegashadu guud ahaan waa inay been abuur tahay oo loo sameeyay qof kale oo aan ahayn qofka la caayay.
Xadgudubyada CAN-SPAM - CAN-SPAM waa qawaaniinta Mareykanka ee daboolaya fariimaha emaylka ganacsiga. Xadgudubyadu waxay ku kici karaan $ 16,000 midkiiba ganaax! Akhriso: Waa maxay sharciga CAN-SPAM?
Sawir gacmeedkan, Sharciga Blog 101, laga bilaabo Monder Law Group dukumiintiyada kuwa arrimaha sharciga iyo masuuliyadda sare la xidhiidha qorista iyo sidoo kale sida looga fogaado.
Shaacinta: Waxaan u adeegsaneynaa xiriiriyeheena xiriirka Sawirada Deposit qoraalkan.
Tags: hubkaasharciyeynta bloggingkaraa-spamnuqul xadgudubkakhayaanodmcasharcigasharcimasuuliyaddaspam
Jul 15, 2016 markay tahay 1:56 PM
Waad ku mahadsan tahay maqaalkan! Macluumaad aad u faa'iido badan oo faahfaahsan oo loogu talagalay kuwa qorsheynaya inay bilaabaan baloog garaynta, iyo maahan oo keliya. Aniga ahaan, waxaa muhiim ah in la ogaado sharciyada xitaa haddii qeeybta kugu cusub tahay ('Ignorantia non est argumentum')